FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA AMBARATONGA FOTSY ANY HIGHLAND ANDREFANA - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana ambaratonga fotsy any Highland Andrefana
Cody the Westie amin'ny faha-5 taonany
Lisitry ny alika fotsy fotsy terre afovoany Andrefana
andrefana HAHY-luhnd wahyt TAIR-ee-uhr
Ny West Highland White Terrier, izay antsoina matetika hoe Westie, dia alika kely sy matanjaka. Mifanaraka amin'ny vatana ny loha ary raha jerena avy eo aloha dia manome endrika boribory. Somary fohy kokoa noho ny karandohany sy ny vodin-tsavony ny orona ny vava bontolo. Misy fijanonana voafaritra. Mainty ny orona. Mihaona ao amin'ny hety ny nify miaraka amin'ny nify izay lehibe ampitahaina amin'ny alika. Ny masom-bolo somary amandy, matevina volontsôkôlà dia mihataka. Mitsangana ny sofina, mivelatra misaraka eo an-tampon-doha ary misy endrika telozoro, tonga amin'ny teboka iray. Somary fohy ny tongotra nefa tsy dia ambany loatra amin'ny tany. Ny rambony tsy voafatotra dia fohy ihany, eo amin'ny 12,5-15 cm eo ho eo ny halavany, matevina kokoa eo am-potony ary mihidy hatramin'ny teboka iray. Esorina ny lalàma indraindray. Ny palitao roa sosona dia manana palitao ivelany mahitsy sy henjana izay manodidina ny 5 santimetatra ny halavany ary akanjo malefaka sy matevina. Ny loko palitao dia fotsy fotsy.
Ny West Highland White Terrier dia lalao ary tertera kely mafy orina izay mora zatra. Sariaka amin'ny olon-tsy fantatra izy io ary mifanerasera tsara amin'ny ankizy. Alika mora mandeha. Ireo alika ireo dia matoky tena sy matoky tena amin'ny alika hafa, saingy tsy hifidy ady raha hain'ny tompony ny maneho fahaiza-mitarika mety. Mety hanenjika saka izy ireo amin'ny fialamboly, ary mila ahitsy raha manandrana izany izy ireo. Matanjaka, sariaka ary be fanahy, Westies dia tia finamanana fotsiny. Na eo aza ny habeny, manao mpiambina tsara izy ireo. Ny Westie dia tia mihady sy mivovo. Raha Westie avela ho lasa mpitarika fonosana , mety mipoitra tampoka izy io rehefa sosotra ary mifamaly amin'ny alika hafa. Ny tsy fahampian'ny fitarihana amin'ny an'ny tompony dia mety hiteraka olana amin'ny fitondran-tena maro, toy ny manaikitra, miambina sakafo sy fanaka . Westie izay manana tompona mahay maneho fampisehoana hentitra, matoky tena, tsy miovaova, tsy hiaina izany olan'ny fitondran-tena . Ireo olana ireo dia azo ahitsy raha vao lasa alika ny tompony mpitarika fonosana marina . Aza avela hivoatra i Westie Syndrome kely alika .
Haavony: Lehilahy 10 - 12 santimetatra (25 - 30 cm) Vavy 9 - 11 santimetatra (23 - 28 cm)
Milanja: Lehilahy 15 - 22 pounds (7 - 10 kg) Vavy 13 - 16 pounds (6 - 7 kg)
Mora voan'ny hernia mitaiza, aretin'ny atiny Legg-Cavé-Perthes syndrome (olan'ny valahana) maso serizy ary ny olan'ny hoditra.
West Highland White Terriers dia mety ho an'ny olona amin'ny tanàna sy tanàna ary koa amin'ny firenena. Mavitrika be izy ireo ao an-trano ary hanao tsara raha tsy misy tokotany.
Ireto alika kely ireto dia mila a mandeha isan'andro . Ny lalao dia hikarakara be dia be ny filan'izy ireo manao fanatanjahan-tena, na izany aza, toy ny karazany rehetra, ny lalao dia tsy hahavita ny fahatsapan'izy ireo voalohany handeha. Ny alika tsy mahazo mandeha an-tongotra isan'andro dia toa mampiseho olana amin'ny fitondran-tena. Izy ireo koa dia hankafy romp tsara amin'ny faritra azo antoka sy malalaka tsy misy firaka, toy ny tokotany malalaka sy mimanda.
Ankizy 2 ka hatramin'ny 5 eo ho eo
Ny palitao indroa henjana, mahitsy, fohy volo dia somary mora taovolo ary manidina kely tsy misy volo. Borosy tsotra fotsiny matetika amin'ny borosy volom-borona henjana. Ny fanadiovana dia tokony hitandro ny fahadiovan'ny palitao, ka tsy mila mandro raha tsy ilaina. Karakarao manodidina ny sofina sy ny masonao amin'ny hety matevina. Ny palitao iray manontolo dia tokony haingo isaky ny efa-bolana ary esorina indroa isan-taona.
Ny West Highland White Terrier dia avy any Poltalloch, Scotland, ary nantsoina hoe Poltalloch Terrier ary nantsoina hoe Roseneath Terrier, nomena ny anarany avy amin'ny fananan'ny Duke of Argyll. Ny karazany dia niseho tamin'ny tapaky ny taonjato faha-19 rehefa nisy mpiompy Scottish an'ny Cairn Terrier namelatra zanak'alika fotsy vitsivitsy tao amin'ny fitoerany. Ireto zanak'alika ireto dia nofidina sy nompiana mba hahazoana ny West Highland White Terrier, izay Cairn fotsy fotsiny. Ny Highland Andrefana dia naseho voalohany tany Etazonia tamin'ny taona 1906 ary neken'ny AKC voalohany tamin'ny taona 1908. Tamin'ny taona 1909 dia novaina ny anaran'ilay karazany avy amin'ny Roseneath Terrier ho an'ny West Highland White Terrier. Tahaka an'i Cairn, ny Westie dia novokarina tamin'ny fifehezana ny isan'ny voalavo, amboahaolo, badger, otter ary verinia hafa.
CET = Club Español de Terriers (Espaniola Terrier Club)
Brody ilay olon-dehibe West Highland White Terrier
'Oscar dia Westie (West Highland Terrier). Eto amin'ity sary ity dia 6 volana izy. Tsy nilatsaka i Oscar, tia nilalao alika hafa ary tsy natahotra mihitsy. Ny fialam-boly ankafiziny indrindra dia ny fihinana bibikely - ao anatin'izany ny tantely, izay azony sy nororany. Tena malemy paika izy amin'ny mpampihorohoro ary tia mifampiraharaha amintsika. Alika kely (20 pounds) manana toetra lehibe! '
Madison ilay Westie tsara tarehy
West Highland White Terriers Susie (ankavia) 12 taona ary Rosie (ankavanana) 9 taona
Brody the Westie sittin 'tsara tarehy!
Brody the Westie mandeha mandeha an-tongotra
Toeram-pambolena WHWT, kennel Al-Moktar, sary natolotr'i Lekesova
Figo, Westie 4 taona dia efa nanao dia lavitra tamin'ny tompony. Teraka tany Slovakia izy, nipetraka tany Aotrisy sy Egypte, ary any Irlande izy izao no mipetraka!
dane lehibe volontsôkôla misy teboka mainty
Ity i Grace, alika kely Westie 2 volana monina any Gresy.
Hijery ohatra hafa momba ny West Highland White Terrier
West Highland White Terrier Sary 1
West Highland White Terrier Sary 2
West Highland White Terrier Sary 3
Alika Terrier White Highland Andrefana: Sarivongana Vintage azo angonina
st bernard ary mifangaro dane be
rahoviana no afaka miala ao anaty boaty i alika kely
Jack Russell corgi Mix alika kely
omby terrier jack russell mix
kalsioma ho an'ny alika miasa